Shir jigjiga uga furmay Soomaalida iyo Oromada – KHAATUMO NEWS
Shir jigjiga uga furmay Soomaalida iyo Oromada
Shirweyne xasaasi ah oo u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ku dhaqan dalka Itoobiya ayaa goor dhow ka fumay gudaha magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya.
Shirka oo socon doono muddo labo cisho ah ayaa waxaa ka qeyb galaya madaxda ugu sarreysa ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Oromada, aqoonyahanno, siyaasiyiin, odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada labada dhinac.
Inta uu socdo shirka ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa nabadda, dhaqaalaha, iskaashiga iyo arrimo kale.
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itooniya Mudane Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) oo shirka daah-furay ayaa ugu horreyn ka warbixiyay ahmiyada uu shirkani u leeyahay labada Shacab ee Soomaalida iyo Oromada, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in la dhowro degaanaashaha iyo nabad ku wada noolaanshaha deegaanka.
Sidoo kale madaxwaynaha deegaanka Oromiya Shimelisa Abdisa oo madasha ka hadlay ayaa dhankiia sheegay inuu soo dhoweynayo isku soo dhawaanshaha labada dhinac, wuxuuna ugu baaqay labada shacab in ay yeeshaan iskaashi buuxa, iyada oo laga wada shaqeynayo nabadda iyo xasiloonida dalka.
Waa shirweynihii labaad oo ay yeelanayaan Soomaalida iyo Oromada oo bilhii la soo dhaafay isku laayey gudaha dalka Itoobiya.
Previous Post: Dhacdo Naxdin leh Oo Ka dhacday Burco.
Next Post: Deg Deg Daawo:Saraakiisha Khaatumo Ka Hadlay Weerarkii laascaanood ee Xalay.